Kalsoonida Caaalamiga ah ee hoggaanka USA oo heerkii u hooseeyay maraysa – Kasmo Newspaper
Kalsoonida Caaalamiga ah ee hoggaanka USA oo heerkii u hooseeyay maraysa
Updated - January 18, 2018 1:34 pm GMT
Xilligii Obama waxay maraysay 48%, hadda waxaaba ka horreeya dalka Shiinaha
London (Kasmo), Kalsoonida dunida inteeda kale ku qabto hoggaanka Maraykanka ayaa taabatay heer cusub oo 30% hooseyn ah, 1 sano ka dib markii la caleemasaaray Donald Trump, marka loo eego xilligii Obama oo ay joogtay 48%.
Waa natiijada ka soo baxaysa yoolbaar (Poll) dhinaca ra’yiga ah oo Machadka Gallup ee fadhigiisu yahay Washington laga sameeay, isla markaasna Wargayska The Guardian iyo qaar kale baahiyeen maanta.
Natiijadu waxay ku soo beegmaysaa maalmo yar ka dib markii ay soo baxday in Trump haysto kalsoonidii ugu hooseysay ee muwaadiniinta Maraykanku ku qabi karaan qof Madaxwdeyne ah, sannadkii u horreeyay ee muddadiisa ka dib.
Shaxda kala horreynta oo ku fadhida fikradaha laga ururiyay 134 dal waxaa kaalinta 1aad ku jira Jarmalka (41%), waxaana ku xiga Shiina (31%), Russiya waxay haysataa (27%).
Natiijooyinkan, sida Wargaysku qorayo, waxay ka markhaati kacayaan qayb ka mid ah walaaca dadka lafagura siyaasadda dibadda ee Maraykanka iyo Yurub, oo marka hab-dhaqanka Trump lagu soo gaabiyo hal-kudhigga ‘America First’, laguna daro dabeecaddiisa fudud ay daciifinayso adkaysigii dimuqraadiyadaha Galbeedku u lahaayeen taxaddiga soo kordhaya ee kali-talisnimada Shiina iyo Russiya.
65 ka mid ah 134ka dal (48%) martabadda Maraykanku waxay hoos ugu dhacday 10%, sida Wargaysku qorayo, qaar ka mid ah khasaaraha ugu muuqa dheerna waxaa laga diiwaangaliyay saaxiibbada Washington ugu dhow ee Yurub, Australia iyo Koofurta Amerika. Boqortooyada Britain, kalsoonida hoggaanka Maraykanka ee dunida waxay hoos ugu dhacday ilaa 26 darajo.